SEM को गोप्यता: गुगल नतीजा कठोर छ Martech Zone
SEM को गोप्यता: गुगल नतीजा कठोर छ
शनिबार, जून १,, २०१। शनिबार, अप्रिल 16, 2016 Douglas Karr
मेरो साथीले पछिल्लो २ बर्षमा राजस्वको केहि नतीजाहरू पाठ लिंक विज्ञापनमा साझेदारी गर्‍यो, जहाँ तपाईं लि buy्कहरू किन्न र बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। प्रकाशकहरू केवल पैसा कमाउन लिंकहरू बेच्छन - र त्यहाँ राम्रो ब्लग र र्याकिंगको साथ स्थापित ब्लगका लागि पर्याप्त अवसर छ।
विज्ञापनदाताहरुका लागी अवसर छ ब्याकलिks्कहरू खोज ईन्जिनहरूमा उनीहरूको जैविक रैंक ड्राइभ गर्नका लागि प्रयोग गर्नुहोस्। गुगलको पृष्ठांकन एल्गोरिथ्म ब्याकलिंक्सको लागि धेरै जसो तौल गरिएको छ, कहिलेकाँही यस्तो देखिन्छ कि तपाईंको साइटमा सामग्रीको गुणवत्तालाई ध्यान नदिई यस श्रेणीकरण राम्रो हुन्छ। सिद्धान्त यो हो कि वैध अनलाइन प्रकाशकहरूले ठूलो सान्दर्भिकताका साथ प्राकृतिक रूपमा लिंकहरू आकर्षित गर्दछन् ... र तिनीहरूको जैविक खोजी श्रेणी माथि जान्छ।
बढ्दो संख्यामा विज्ञापनदाताहरू बिरामी र पर्खाइको लागि थाकेका छन् र उनीहरू अझ राम्रो रैंक प्राप्त गर्न भुक्तान गरिरहेका छन्। धेरै उत्तम सामग्री ड्राईभिंग एकदम कामकाज हो कि महिनौं को लागी तिर्न सक्दैन ... ब्याकलिंकहरू खरीद गर्दा केहि चाँडो र द्रुत र नाटकीय परिणाम प्राप्त गर्न सक्छ।
तपाईंको ए links्कर ट्यागमा rel = "nofollow" संकेत नगरी भुक्तान गरिएको लिंकहरू प्रकाशन गर्नु उल्ल is्घन हो गुगलका सेवा सर्तहरू। गुगलले सजाय दिन्छ र डे-अनुक्रमणिका साइटहरू जुन उनीहरूले निर्धारण गरेको लि links्कहरू उनीहरूमा छ। वैध अनलाइन प्रकाशनको लागि, राजस्व Google Adsense ले प्रदान गर्न सक्ने कुनै राजस्वको ओभरडो छाया गर्न सक्छ।
२०० 2008 मा उनको राजस्व लगभग $ ,7,000००० थियो ... गुगल ऐडसेन्समा करीव $ १,००० को तुलनामा। खराब छैन।
मेरो नम्र रायमा, प्रत्येक गम्भीर खोजी ईन्जिन मार्केटिंग फर्मसँग अब परिणामहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्न पछाडिको पकेटमा ब्याकलिinking्क प्रोग्रामहरू छन्। सेतो टोपी एसईओ अब काम गरिरहेको छैन किनकि गुगल अब भुक्तान गरिएको ब्याकलिink्क कार्यक्रमहरूको साथ ओभरर्न गरिएको छ शीर्ष खोजी परिणामहरूमा धनी साइटहरू ड्राइभ गर्दै।
मेरो विचारमा, गुगल धेरै हदसम्म कठोर छ।
उसको सशुल्क लिंकमा गन्तव्य साइटहरूको सूची समीक्षा एकदम रोचक छ। यो प्रमुख स्पाम होईन र पैसा बनाउँनुहोस् अब त्यहाँ भीड, यो वैध हो ईमानदार व्यवसायहरु। चाहे लि directly्कहरू खरीद गर्न ती सिधै जिम्मेवार छन् वा उनीहरू अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको खोज इञ्जिन मार्केटिंग कम्पनीले खरिद गरेको छ ... मलाई थाहा छैन। तर उनीहरू भुक्तान गरिरहेका छन्, र गुगलका नतीजाहरू यसकोलागि हेरफेर गरियो।
गुगलले यसको एल्गोरिदममा नियमित परिवर्तनहरू पुष्टि गरेको छ। यस वर्षको सुरूमा गुगलले यो पनि पुष्टि गर्‍यो कि तिनीहरू अधिक वजनका ब्रान्डहरू थिए। के त्यो परिणामको सान्दर्भिकता सुधार गर्ने हो? वा यो वेबमा भर पपिंग लिंक गर्ने कार्यक्रमहरूको हमलाबाट आफूलाई बचाउन खोज्ने हो?
यसमा अन्तिम विचार ... म पक्का छुइन कि भुक्तान लिंकहरूको लागि पैसा स्वीकार गर्नु तपाईको भलाईको लागि छ। यद्यपि यो निश्चित रूपमा तपाइँलाई डि-अनुक्रमित बनाउन सक्दछ यदि तपाइँ समातिनुभयो (जुन धेरैजसो हुने देखिदैन), कम रैंकिंगको साथ साइटहरूमा लिंकहरूको एक समूह जम्मा गर्ने र, सायद कुनै प्रासंगिकताले तपाइँको आफ्नै साइटको श्रेणीलाई चोट पुर्‍याउन सक्दैन। माथिको मेरा साथीहरूको उदाहरणमा, उसले स्वीकार्छ कि उसको पेजरran्क खसेको छ तर ऊ किन यसको पहिचान गर्न सकेको छैन।
के उसले लिंकहरूको लागि भुक्तानी गर्न छोड्नेछ? उनी अझै भन्छन् कि पैसा अहिलेको लागि तल झार्न पनि धेरै राम्रो छ।
टैग: ब्याकलिinking्कGoogle AdSenseसशुल्क लिंकहरूएसईओ पुस्तकपाठ लिंक विज्ञापन
एजेन्सीहरूलाई उनीहरूको कफी टेबलमा यो पुस्तक चाहिन्छ
जुन २,, २०१ बिहान :21:२२ बिहान
म एक WordPress सल्लाह र ट्यूटोरियल साइट निर्माण गर्दैछु, जुन जनवरीदेखि अनुक्रमित गरिएको छ। मसँग high२ उच्च स्तरको पोष्टहरू छन्, जसमध्ये केहि २ 52००+ शब्दहरू, सबै मौलिक सामग्री, सबै आन्तरिक रूपमा ठोस कथा संरचना प्रदान गर्न जोडिएको छ, र सबै आउटगोइ links लिंकहरूको उचित मात्रा रहेको छ (यो वेब हो, पछि सबै)।
करीव प्रत्येक लेखमा कार्ययोग्य सामग्री छ, पाठकले अहिले गर्न सक्ने केहि।
उत्कृष्ट गुणवत्ताको बावजुद, यी दुई पोष्टको बारेमा गुगलमा शीर्ष १०० पृष्ठहरू बनाउँछन्।
जुन म वास्तवमै धेरै ध्यान दिदिन ... शीर्ष १०० परिणाममा पृष्ठहरूको 90 ०% बाहेक ... फोहरमै फोहोर हुन्छ। डबल अंक नम्बर स्प्याम ब्लगहरू हुन्।
अब एक वैज्ञानिकको रूपमा, म अवलोकन गर्न प्रशिक्षण पाएको छु।
मेरो अवलोकन यो छ कि Google मा मापन गुणस्तर वा पाठकहरूको उपयोगिताको सही तरीका छैन।
जस्तो मैले भनें, म यति धेरै आपत्ति पाउँदिन कि म कम छु। मेरो गोमांस यो हो कि म स्प्याम ब्लगहरूद्वारा सपाट भइरहेको छु।
यो rigged छ?
मलाई थाहा छ कि "तातो" बजारमा, यदि गुगलले यो पत्ता लगाउँदैन भने, साना प्रकाशकहरू ठूला
गुणस्तर जानकारी सजीलो जैविक खोजी प्रयोग गरी फेला पर्दैन। यो सेवा गर्दछ कि
गुगल खुला प्रश्न हो। यसले निश्चित रूपमा पाठकहरूको राम्रो सेवा गर्दैन।
जुन 21, 2009 मा 11: 25 PM
तपाईंको एक कहानी छ जुन म दैनिक देख्छु, डेव। गुणस्तरीय सामग्रीको साथ ठूला प्रकाशकलाई अनुक्रमणिका गरिंदैन। मेरो डर, जस्तो मैले मा लेखेको छु कि सम्पूर्ण प्रणाली भुक्तान लिंक गर्ने रणनीतिहरूको माध्यमबाट हेरफेर भइरहेको छ। गुगललाई यसमा अर्को योजना चाहिन्छ - लोकप्रियता भन्दा पृष्ठको प्रासंगिकतामा अधिक तौल राख्नु सहित।
जुन 21, 2009 मा 11: 36 PM
यदि यो जारी रह्यो भने यसले स्लेम एक उद्यमी विन्डो बन्द गर्दछ: सानो फ्राई कडा परिश्रम र गुणवत्ता उत्पादनको साथ प्रवेशमा बाधा हटाउन सक्षम हुनेछैन। त्यसोभए हामी फेरि फर्क्यौं जहाँबाट हामी सुरु गरेका थियौं।